heveriny - Synonyms of heveriny | Antonyms of heveriny | Definition of heveriny | Example of heveriny | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for heveriny
Top 30 analogous words or synonyms for heveriny
Fiaraha-monina Na dia samihafa aza ny fiaraha-monina tsirairay, mitovitovy ny fomba firavany: hosoka, halatra, herisetra, ady na vonom-poko raha tsy mahita ny famantarany ao amin'ny fiarahamonina intsony ny olona, ary mahafantatra amin'ny heveriny fa "foko". Amin'ny fiaraha-monina vaovao dia mety ahitana ireo olona mbola manaiky ny fitsipika na afa-belona tamin'ny fitontonganan'ilay fiaraha-monina taloha.
Aterineto Misy fitondram-panjakana mihevitra fa ny Aterineto dia zavatra ratsy, ary manakana ny ampahany na ny Aterineto rehetra. Ohatra, ny governemanta Sinoa dia mihevitra fa ratsy i Wikipedia. Matetika tsy misy olona ao Sina afaka mamaky izany na hanampiana izany. Misy ray aman-dreny manakana ny faritr'Aterineto izay heveriny fa ratsy ho an'ny ankizy. Ireo firenena fantatra manakana ny Aterineto iray manontolo dia i Mianmara ary i Korea Avaratra.
Fifampizarana Izay zavatra hita sy tsapa amin’ny fiainana andavanandro, dia misy tokoa ny olona miavaka amin’ny mpiara-monina noho ny fahaizany maneho fitiavana, eny na dia tsy kristiana aza. Misy amin’izy ireny anefa fitiavana tsy araka ny didin’i Jesosy ka tsy ahafahana mamaritra azy ho sakaizan’ny Tompo – mitia izy satria samy manan-karena mitovy aminy ilay olona, mitia izy satria ambony firazànana tahaka azy ilay olona, mitia izy satria iray finoana aminy ilay olona, mitia izy satria iray firehana politika aminy ilay olona. Rehefa nolazain’i Jesosy hoe sakaizany dia foana ny fahasamihafana rehetra, ka mitia tsy misy efitrefitra intsony. Mino aho fa sarotra amin’ny sasany ny hanaiky hitovy laharana amin’ny hafa izay heveriny fa iva razana noho izy, na mahantra, na hafa firehana politika, na hafa finoana... Raha sakaizan’i Jesosy tokoa ny olona iray dia hitia ny hafa izy satria ny fitiavan’i Jesosy izay môdely arahiny dia fitiavana tsy misy fetra.
Rasendrasoa Rehefa niady tamin'Andrianjafy anadahindreniny anefa Andrianampoinimerina dia nandefa iraka hampanaiky an'Ambohidrabiby izy ka tsy nanaiky Ambohidrabiby raha tsy mijanona ho menabe sy tsy alaimbodihena Ambohidrabiby araka ny hafa-dRalambo manao hoe "Ambohidrabiby dia vohitry ny tera-dRabiby sy tera-dRalambo eo Ambohidrabiby" ary koa amin'ny maha tendrombohitra 12 masina azy. Noeken'Andrianampoinimerina izany fepetra izany ary nafarany mba tsy hovain'izay mpanjaka mandimby azy koa. Ary satria Ambohidrabiby no vohitra nanaiky voalohany an'Andrianampoinimerina dia nataon'Andrianampoinimerina ho " Zoky sy hasin'Imerina" ary "ketsa mahavita tena Ambohidrabiby". Koa raha napetrak'Andrianampoinimerina teo i Rasendrasoa dia tsy nataony tompomenakely na tompombodivona, fa nijanona hatrany ho menabe Ambohidrabiby ka ny mpanjaka mivantana avy eny Ambohimanga na Antananarivo no mitantana an'Ambohidrabiby hatramin'ny taona 1895. Izany koa no antony manazava fa ny teraky Rasendrasoa dia tsy mba nanana trano na tany eo antampon'Ambohidrabiby fa ny fasany ihany no ao. Satria tokoa raha nizara tany teo amin'ny vohitr'Ambohidrabiby ny Mpanjaka Andrianampoinimerina dia nozarainy tamin'ny taranak'Ambohidrabiby ny manodidina ny rova teo Ambohidrabiby ary tsy mba nomeny zara-tany teo i Rasendrasoa. Ary nohinian'Andrianampoinimerina ho Rasendrasoa izay taranak'Andriampolofantsy lahimatoan'ny Zanadralambo amin'Andrianjaka no napetrany teo Ambohidrabiby satria heveriny fa tsy voadika ny hafa-dRalambo ary mora hoan'ny Mpanjaka Andrianampoinimerina no mifehy an'Ambohidrabiby sy ny vohitra miaraka aminy.
Vahiny (Albert Camus) Nahare ny fahafatesan'ny reniny i Meursault. Tamin'ny fandevenana azy dia tsy naneho fihetseham-po na alahelo mihitsy izy. Rehefa nantontaniana izy raha tia hijery ilay vatamangatsiakan'ny reniny dia nandà izy, ary lasa nifoka sigara sy nisotro kafe teo anoloan'ny faty. Tsy naneho ny fihetseham-po sy ny alahelo ny izy fa nanisy resaka momba ny fihetseham-pon'n sasany tany amin'ny fandevenana. Nifanerasera tamin'i Marie izay mpiasany taloha azy. Mampiaraka izy roa ireo, lasa nilomano, nijery horonantsary komedia ary niray ara-nofo na dia vao nandevina aza. Andro vitsivitsy taoriana, dia nanampy ny namany nipetraka tsy lavitry ny toerana nisy azy Raymon Sintès izy, izay tia hamaly ny hitsaka nataon'ny sipany arabo izay noheveriny fa nampirafy azy. Nanaiky ho an'i Raymond i Meursault ary nanoratra taratasy tany amin'ny sipany ahafahan'izy sy Raymond hiray ara-nofo ary handrora amin'ny tarehiny ho valin-kitsaka. Tsy nahita antony tsy anampiana azy i Meursault, ary nahafa-po an'i Raymond ilay izy. Tsy dia naneho olana mikasika ilay ratra ara-panahin'ny sipan'i Raymond izy noho izy mino an'i Raymond momba ilay fampirafian'ilay sipany arabo, sady efa mamomamo izy ary tsy mahatsapa fiaraha-miory. Amin'ny ankapobeny dia heveriny fa mahaliana na manelingelina ny olona, na tsy mahatsapa inona na inona momba an'izareo izy.
IEEE 802.11 Ny PCF dia tonga dia alefa ao amin'ny voalaza intervals rehefa AP heveriny fa ilaina, raha toa ka.x. ianao dia mba handefa ny fotoana mitsikera ny fampahalalam-baovao mba hahazoana antoka fa tsy hisy ady mandritra ny fotoana. Tany am-piandohana na inona na inona toy izany fe-potoana tsy misy ny fifaninanana, ny AP mandefa ny rehetra ny nodes ao amin'ny toe synchronization (Fanilo), ary avy eo dia mizara ny fotoana fametrahan'entan'ny mpianatra izay ahitana sy manendry ny isaky ny toby fiantsonana ny fiarovana petra-bola boaty izay iray ihany no afaka ataon-drizareo na hahazo angon-drakitra. Ny zana-kazo avy amin'ny node A ho A node B atao na ho azo avy amin'ny ny AP (ao amin'ny boaty Iray) ary avy eo dia avy amin'ny AP ny B (boaty B), na mivantana avy A ny B tany ny petra-bola azo antoka vata ny A. Ny manomboka ny tsirairay slot dia nidika koa amin'ny alalan'ny fandefasana jereo box Fitsapan-kevitra avy amin'ny AP ny node fa manana ny amin'izao fotoana izao ny boaty.
Didy jadona Ny mpanao didy jadona dia mila manao zavatra maro mba nametraka ny fitondrana jadona; dia mila manaisotra ny mpanohitra (izay mety ho ara-politika na ara-pivavahana) - ny sasasny dia atsofoka am-ponja, atao sesitany (naniraka ivelan'ny firenena), na vonoina. Dia avy eo mila mandrara (na tsy hamela) antoko politika izay manohitra ny fitondrany ireo mpanao didy jadona. Dia haka ny fanana'ny antoko politika toa ny birao sy ny toy izany. Ny mpanao didy jadona dia mety hamoana na manenjika ny sasany na andrim-panjakana na ny finoana heveriny fa diso. Ny mpanao didy jadona ihany koa dia mila mamoana na manakatona andrim-panjakana demokratika toa ny parlemanta ary indraindray ny kaongresy. Misy fikambanana ara-tsosialy, toy ny vondrona mampiaro ny zo sivily, ny fikambanana miaro ny zon'olombelona, foibe fanampiana ara-dalàna, sendikam-pianatra, fikambanam-pampianatra, ny varotra na ny mpiasa sendika ihany koa ny vita sy ireo izay maharitra amin'ny asa toy izany dia mety hovonoina. Ny mpanao didy jadona dia tokony efa misy manitsy ny lalàm-panorenana, na nametraka iray vaovao tanteraka. Izany no mahatonga ny hery hanaja ny lalàm-panorenana (amin'izay dia tsy iadian-kevitra). Mpanao didy jadona dia foana ny fitsipika amin'ny fampihorohoroam-panjakana, izay ahitana amin'ny polisy miafina, borigady famonoana, fisamborana kisendrasendra na tsy fahazoana mivezivezy amin'ny alina, tsy voafetra ny fisamborana tsy misy fitsarana sy ny tambajotra ny fampijaliana foibe sy tany amin'ny toby fitanàna. Ny sasany dia manangana fitondrana jadona dia mamorona fahavalo anatiny (ao amin'ny firenena) noforonina (na tsy misy) mba hanamarinana (hanome antony) ny fampiasana ny herisetra ara-tafika amin'ny mponina tsy manan-pitaovam-piadiana.